Wararka - Shaqooyinka kala duwan ee lixda shaah ee ugu muhiimsan
Hawlaha kala duwan ee lixda shaah ee ugu muhiimsan
Noocyada caleenta shaaha waxaa loo qaybin karaa lix qaybood: shaah madow, shaah cagaaran, shaah cad, shaaha jaalaha ah, shaah oolong iyo shaah madow, iyadoo ku xiran heerka halsano. Shaaha kala duwan waxay leeyihiin hawlo daryeel caafimaad oo kala duwan. Bal aan eegno shaqooyinka kala duwan ee lixda shaah ee waaweyn:
Soo bandhig shaqooyinka kala duwan ee lixda shaah ee waaweyn
1. Shaah cagaaran wuxuu yareeyaa dabka
Shaaha cagaaran wuxuu leeyahay taariikhda wax soo saarka ugu dheer wuxuuna leeyahay qaybo hodan ah, sida Xihulong, Huangshan Maofeng, Dongting Bichun Luochun, Jingping Houkui iyo wixii la mid ah. Shaaha cagaaran waa nooc ka mid ah shaaha aan khamiir lahayn. Waxay leedahay muuqaalo kala duwan iyo dhadhan iyo dhadhan gaar ah. Caleemuhu waa shaaha ugu caansan uguna shaaha ugu ballaadhan.
Xeryaha polyphenol ee Catechin waxaa loo aqoonsaday inay yihiin qaybaha muhiimka u ah faa'iidada caafimaadka ee shaaha cagaaran, waxayna leeyihiin hawlo daryeel caafimaad oo kala duwan, oo ay ku jirto hagaajinta caafimaadka wadnaha, miisaanka oo yaraada, iyo shucaaca shucaaca korontada. Shaah badan. Marka laga eego dhinaca daawada Shiinaha, shaaha cagaaran waa qabow oo waxtar leh. Dadka dabkoodu hooseeyo iyo qabowga caloosha waa inay cabbaan wax yar, dadka kuleylka engegan ee u nugul inay xanaaqaan oo jirkoodu xooggan yahay waa inay cabbaan.
Heerkulka biyaha ka soo baxa shaaha cagaaran ayaa ah 85 ℃. Waqtiga ayaa la doorbidayaa 2 ~ 3 daqiiqo. Saamiga wanaagsan ee shaaha cagaaran iyo biyaha ayaa ah1:50. Xirmooyinka shaaha, koobabka galaaska ama koobabka galaaska ee hufan ayaa loo isticmaali karaa, daboolka waa inaan la daboolin marka la karinayo.
2 Shaah madow wuxuu diiriyaa caloosha wuxuuna ilaaliyaa wadnaha
Waxaa jira noocyo badan oo shaah madow ah. Shaaha madow guud ahaan wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood: Gongfu shaaha madow, Souchong shaaha madow, iyo shaaha madow ee jaban. Casaan macaan oo dhalaalaya, caleemo huruud ah oo jilicsan, casaan dhalaalaya iyo wixii la mid ah. Shaaha madow wuxuu soo saaraa asalka asalka ah iyo xuquuqda daabacaadda.
Theaflavins waa qaybaha shaqaynta shaaha ee shaaha. Tiro badan oo daraasado caafimaad ah ayaa caddeeyay in Honghong ay gacan ka geysato habeynta waxyaabaha ku jira borotiinka-hooseeya iyo borotiinka kolestaroolka sare ee halbowlayaasha aadanaha, taas oo horseedaysa in laga labalabeeyo yareynta cudurrada wadnaha. Flavin sun antioxidant, ka-hortagga kansarka, ka-hortagga cudurrada daba-dheeraada iyo ka-hortagga. Marka laga eego warbixinnada suugaanta ee hadda jira, oo la mid ah shaaha kale, shaaha madow ee guud wuxuu leeyahay muujinta hore ee cudurka wadnaha. Marka laga eego dhinaca daawooyinka dhaqameed ee Shiinaha, shaaha madow waa dabeecad diirran wuxuuna leeyahay hawsha diirimaadka caloosha.
Waxaa ugu wanaagsan in shaaha madow lagu sameeyo biyo cusub oo la karkariyey, xaddiga daqiiqaduhu waxay u dhigantaa tii shaaha cagaaran, waqtiga ugu wanaagsan ee wax lagu karsado waa 3 ~ 5. Habka ugu fiican ee loo sameeyo shaaha madow waa in la isticmaalo koob galaas ah. Habka gaarka ah wuxuu adeegsan karaa habka tuuridda dhexe. Marka hore, ku shub 1/10 biyaha kulul ku shub koobka, ka dibna ku shub 3 ~ 5 garaam oo shaah ah, ka dibna ku raaci dhalada. Xumbo. Ku samee shaah madow daboolka, shaaha wuxuu noqon doonaa qaxwo badan.
3 Shaah cad waa anti-bakteeriyada iyo shucaaca lidka ku ah
Farsamaynta farsamaynta shaaha cad waa mid fudud. Sababtoo ah habka shaaha, shaaha ayaa noqda pekoe, burooyinkeeda iyo caleemihiisuna waa caws, qaabku waa dabiici, xarrago iyo nadiif, silvery cad, cawl iyo cagaar, midabka maraquna waa iftiin. Heerarka soo -qaadistu way kala duwan yihiin. Waxaa loo qaybin karaa cirbadda lacagta caddaanka ah, peony cad, sunnaha qaddarinta iyo sunnayaasha cimriga dheer.
Halabuurka kiimikada ee shaaha cad ayaa guud ahaan la barbar dhigaa shaaha cagaaran. Laga soo bilaabo qaar ka mid ah dib -u -eegista suugaanta la xiriirta, shaaha cad wuxuu leeyahay saamayn bakteeriya ka fiican shaaha kale. Intaa waxaa dheer, shaaha cad ayaa sidoo kale leh saameyn liddi ku ah ka-hortagga. Maraykanka iyo Yurub, ka -soo -baxa shaaha cad ayaa loo adeegsadaa horumarinta alaabta daryeelka maqaarka ee caafimaadka. Shaaha cad waa dabeecad qabow wuxuuna yarayn karaa dabka iyo qalalka.
Habka shaaha cad wuxuu guud ahaan la mid yahay kan shaaha cagaaran.
4. Shaaha madow wuxuu ka ilaaliyaa dhaxanta wuxuuna yareeyaa baruurta
Shaaha waa nooc shaah oo gaar ah oo leh taariikh dheer iyo noocyo kala duwan, sida shaah Yunnan Pu'er, shaah Hunan Fuzhuan, Guangxi Liucha, shaah Hubei Qingzhuan iyo Sichuan Biancha (Kangzhuan). Shaaha madow waxaa iska leh shaaha ka-soo-baxay. Iyada oo la adeegsanayo wax walba, caleemaha shaaha waxay u muuqdaan inay marayaan falcelin kiimiko oo khiyaano leh si ay u soo saaraan qaybo waxtar u leh jirka aadanaha.
Shaaha Pu'er iyo shaaha Fuzhuan waa wakiilo noocyo kala duwan oo shaah madow ah. Waxay leeyihiin maaddooyin kala duwan, laakiin faa'iidooyinkooda ayaa hoos u dhacay. Marxaladdan, cilmi -baaristu way yaraanaysaa. Shaaha Pu'er wuxuu leeyahay shaqooyinka hoos u dhigidda, hoos u dhigidda lipids-ka dhiigga, iyo ka-hortagga fayraska. Waa kuwee xeryahooda statin ee laga yaabo inay ku jiraan saamaynta hoos-u-dhigga garabka; Shaaha Fuzhuan wuxuu kaloo leeyahay saameyn wanaagsan oo lagu yareeyo dufanka iyo dufanka. Shaqada borotiinka ee hoos u dhigaysa lipid waxay la mid tahay tii shaaha madow. Waxaa jira noocyo badan oo kaabsoosha ah, waxaana jira noocyo badan oo shaaha kale ah. . Shaaha waa dabeecad diirran, wuxuu ka caawiyaa inuu ka ilaaliyo qabowga, wuxuuna ku habboon yahay dadka leh dastuurro daciif ah oo qabow. Shaah madow waa wax fudud in la cabbo, waxaadna dooran kartaa inaad u isticmaasho dheriga dhoobada guduudka ah, koob xarrago leh ama tureen si aad u diyaariso.
5 Shaah huruud ah ku habboon qof walba
Shaaha jaalaha ah wuxuu u qaybsan yahay shaah huruud ah (sida Anhui Huoshan Yinzhen, Mengding Huangya iyo Mogan Huangya), Huangxiaoya (sida Weishan Maojian, Beigang Maojian iyo Pingyang Yellow Decoction) iyo shaah huruud ah (sida Anhui Huoshan Huang Dacha) iyo Guangdong). Astaamaha tayada ugu weyn ee shaaha huruudda ah waa maraqa huruudka ah ee caleenta huruudda ah, caleemaha hoose ee jaalaha ah jaalaha ah, maraqa shaaha oo jaale ah, iyo shaah qallalan ayaa iyaguna u muuqda huruud iyo dhalaalaya, waana cad oo wacan, dhadhankuna waa qaro weyn oo raaxo leh.
Hadda, cilmibaarista faa'iidooyinka caafimaad ee shaaha jaalaha ah ayaa xoogaa daciif ah. Marka la barbardhigo dhadhanka raaxada leh ee shaaha cagaaran iyo dhadhanka diirran ee shaaha madow, astaamaha dhadhanka shaaha jaalaha ah ayaa ku jira dhexda, taas oo ku dhawaad ​​ku habboon dadka caadiga ah. Guud ahaan waxay la mid yihiin shaaha cagaaran.
6, Oolong shaaha luminta miisaanka oo yaraada
Shaaha Oolong waxaa sidoo kale loo yaqaan shaah cagaaran, iyo dhadhanka qafiifka ah ee shaaha Fujian ayaa mar kale isu yimaada. Shaaha Oolong wuxuu badiyaa u qaybsan yahay 4 qaybood, oo kala ah Koonfurta Oolong, Waqooyiga Fujian Oolong, Guangdong Oolong, iyo Taiwan Oolong. Shaaha Oolong waxaa iska leh qaybta shaaha oo badhkeed la kariyey, inta u dhexaysa farshaxanka farsamaynta iyo farsamada gacanta iyo shaaha madow.
Qaar ka mid ah catechins -ka caadiga ah, polysaccharides -ka shaaha, saponin shaaha, iwm ee shaaha cagaaran iyo shaaha madow, shaaha oolong waxaa ku jira maaddooyin gaar ah. Tusaale ahaan, “catechins-ka methylated” ee xarumaha shaaha oolong qaarkood waa xasaasiyad-diid. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah warbixinnada suugaanta ee la xiriira, shaaha oolong wuxuu saamayn fiican ku leeyahay miisaanka oo yaraada marka loo eego shaaha kale. Marka laga eego dhinaca daawooyinka dhaqameed ee Shiinaha, shaaha oolong wuxuu leeyahay dabeecad dejinaysa wuxuuna ka saari karaa kulaylkii duugoobay. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay gacmaha waxayna yareyn kartaa qallajinta dayrta.
Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dheri dhoobo guduudan ah ama koob dabool leh si aad u samayso shaah oolong, hubi inaad isticmaasho biyo karkaraya, oo dabool daboolka ka dib.
Lixda qaybood ee kor ku xusan ka sokow, waxaa sidoo kale jira shaah dib loo cusboonaysiiyay, oo ah, shaah dib loo soo saaray iyada oo lagu saleynayo lixda qaybood ee shaaha ee kor ku xusan, sida shaah udgoon, shaah deg -deg ah, iwm. shaah cagaaran, sida shaah cagaaran oo la dubay iyo shaah madow. Waxaa laga sameeyaa caleenta shaaha iyo isku darka ubaxa iyo udugga shaaha, si uu u nuugo udgoonka ubaxa una helo magaca shaaha udgoon, sida "shaah yaasmiin", "shaaha haadka toy", "shaah orchid luul ah" "," shaah madow oo kacay " iyo wixii la mid ah.
Ka horeeyey Soo dejinta iyo Dhoofinta Maokun Co., Ltd.waa warshad isku dhafan iibinta, wax soo saarka, cilmi baarista iyo horumarinta, shaaha iyo shaaha. Waxay bixin kartaa adeegyo taageeraya shaaha iyo shaaha;
Wax badan ka baro shaaha
Baro Aqoon Badan
Wax badan ka baro shirkadda
Aragtidayadu waa inaan u oggolaanno qof walba inuu ku raaxeysto koob wanaagsan oo shaah Shiine ah!
Caafimaadka bini'aadamka, waxaan had iyo jeer u doodnaa dabeecadda nolosha noolaha, waxaanna u hibeynaa inaan noqonno u -doodaha iyo hoggaamiyaha shaaha dabiiciga ah.
Shirkaddu waxay diiradda saareysaa soo -saarka iyo dhoofinta shaaha jir ahaan loo xaqiijiyay EU -da iyo Waaxda Beeraha ee Mareykanka, shaaha caadiga ah ee EU -da iyo shaaha Kungfu oo leh astaamo Shiine ah.
Wax Cajiib Ah Ayaa Soo Socda
AAN BILLAABO KA HADALKA MASHRUUCAADA！
Nala soo xiriir si aad u bilowdo
Waqtiga dhejinta: Oct-15-2021